June 2021 - Babal Khabar
Jun302021 by EditorNo Comments
सार्वजनिक यातायात खुलेको पहिलो दिननै यात्रुको भिड, यस्तो छ अबस्था
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै दुई महिनापछि मंगलबारदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक बसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी जोर–बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । यसरी सवारी साधन चलाउँदा स्वीकृत सिट संख्याभरि मात्र यात्रु बस्न पाउँछन् । तर सार्वजनिक बस सञ्चालनको पहिलो दिन चालक, सहचालक र यात्रुसमेत धेरै सचेत भएको देखिएन । धेरै बसमा सेनिटाइजर राखिएको छैन भने कतिपय यात्रुले मास्क लगाएका छैनन् । थोरै बस चलेका कारण यात्रुको संख्या बढी छ । बसमा सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्न दिएको छैन । बस संख्या कम हुँदा सर्वसाधारणले सहज ढंगले यात्रा गर्न पाएका छैनन् । सरकारको अवैज्ञानिक निर्णयको परिणाम : व्यवसायी यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारीमा देखिएकोे यो अव्यवस्था अवैज्ञानिक निर्णयको प
टोपबहादुरहरूको यस्तो प्रस्ताव सुनेर प्रधानमन्त्री ओली मज्जाले हाँसेपछि…
काठमाडौं- रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापासहित एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादीहरु केपी ओलीसँग नपाइने कुरा माग्दै दिन बिताइरहेका छन् । उनीहरुको माग छ, ‘पार्टीको नाम एमाले नै राख्ने कुराले हाम्रा साथीहरुमा अलिक समस्या आयो । यसलाई फेरौँ ‘ केही दिनअघि ओलीसँगको भेटमा टोपबहादुरले त भने पनि, ‘हामीले देशलाई प्रचण्डमुक्त बनाउन चाहेका हौँ । त्यसैले सानातिना कुरामा नअल्मलिऔँ !’ केपीले सोधे, ‘के हो सानातिना कुरा ?’ प्रभु साहले भने, ‘नाम मिलाउने, जबजलाई हिजो एकतामा जाँदा भनिएजस्तो जनताको जनवाद भन्ने …।’ यति कुरा सुनेपछि केपी मज्जाले हाँसे र भने, ‘हामीले एमाले र जबज छोड्ने ? हामीले छोडेपछि माधव नेपालले लगिहाल्छन् नि यस्तो हुँदैन, नो चान्स…!’ यति कुरा सिध्याएर बालुवाटारबाट निस्कँदा पूर्वमाओवादीहरु भन्दै थिए, ‘डुबायो–डुबायो…!’ यसपछि उनीहरुबीच एमालेमा रहन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा आयो ।
यस कारण मूल्यको राजनीति छाडिन्न : माधव नेपाल
१६ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग बुधबार गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता नेपाललाई एमाले जेठ २ मा फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न आएको थियो । जवाफमा उनले विधि, पद्धती र मूल्यको राजनीति नछाड्ने बताए । लोकतन्त्र, संविधान खतरा उन्मुख रहेको भन्दै उनले ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नहुने बताए । यद्यपि आफूले बोल्यो कि पोल्यो हुने अवस्था रहेको एमाले नेता नेपालले सुनाए । अर्को खबर विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले गरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले बुधबार काठमाडौंमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार न
नेपालको चुच्चे नक्सा नभएको, केरमेट गरी नयाँ शुल्क राखिएको, पुरानै पुस्तक पढाएको र कतिपय पुस्तकको कभर ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ बनाएको किताब बितरण पछि
काठमाडौं : विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जेठ २६ गते पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को ८८ औँ बैठकमा पुरानो पुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले अनुगमन गर्नुस्, चुच्चे नक्सा नभई पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्री गरेको पाइए तत्काल प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्नू।’ तर, यी मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अहिले पनि धमाधम चुच्चे नक्सा नभएका पुस्तक वितरण भइरहेका छन्। नेपाल अविभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले अहिले पनि धमाधम पुरानै पुस्तक वितरण भइरहेको बताउँछन्। पाठ्यपुस्तक अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘पुरानो पुस्तक जफत गर्ने शिक्षा मन्त्रीले निर्देशन त दिनुभयो, तर अहिलेसम्म जफत गरेको पाएका छैनौँ, अनुगमनका क्रममा चुच्चे नक्सा नभएको पुस्तक नै धमाधम वितरण गरिएको पाइयाे।’ सरकारको बदमासी र हेलचेक्रयाइँले पुरानै
जबराले विश्वको यस्तो उदाहरण मागेपछि सरकारी वकिलले दिन सकेनन् जवाफ, अब के होला?? के विश्वको उदाहरण भनेको हेर्मुहोस्।
काठमाडौं- संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाई भैरहेको छ । निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिएपछि सरकार पक्षका अधिवाक्ताले अहले बहस गरिरहेका छन् । बहसकै क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई नियुक्त नगरेको विश्वको उदाहारण छैनन्? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उक्त प्रश्नपछि नायब महान्यायाधिवक्ताले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । मंगलबारको बहसमा प्रधानन्याधीश राणाले नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई नियुक्त नगरेको विश्वको उदाहारणबारे सोधे। उनले सोधेको प्रश्नको उत्तर भने पाएनन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले त्यसको ठ्याक्कै उद्धरण प्र्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनले त्यो प्रश्नसँग सम्वन्ध नरहेको भारत
शुक्रबारदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन यसरी चलाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनहरूले शुक्रबारदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले देशभरका मजदुर र व्यवसायीलाई सवारी चलाउनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । ‘असार १८ देखि देशभर चल्ने छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउने तयारी गरेका छौँ,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो । स्वस्फूर्त सार्वजनिक सवारी चलाउने र कारबाही गरे पनि जेल जान तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउनबाट रोक्नका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मजदुर संगठन तथा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । १५ असारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ठूला सवारीसाधन सञ्चालन अव्यावहारिक रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज
फेरि घट्यो सुनको मुल्य,तोलाको कति पुग्यो ?हेर्नुहोस्।
काठमाडौं / बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार तोलामा एक सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबार प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९० हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ८९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्यपनि घटेर तोलाको १ हजार २ सय ९० रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
सहि कि गलत ?? प्रतिक्रिया दिनुहोस्। ‘सरकारले ऐतिहासिक काम धेरै गरेको कारण एमाले नागरिक माझ झन् लोकप्रिय हुँदै गयाे’
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले नागरिक माझ झन् लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनुभएको छ । बुधवार बालुवाटारमा दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्वक ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाएका कारण नागरिकमा लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘योजनाबद्ध दृष्टिकोणसहितको विकासको तीव्र आकाङ्क्षा र त्यस आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारकाे क्रियाकलापले हाम्रो पार्टी झन् बढी लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।’ बिमिस्टेक, लगानी सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न सम्मेलन गरेर ती सम्मेलनमा सही धारणा र विचार अघि सारेका कारण नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय हित सार्वभौमसत्तालाई
कस्तो छ रोनाल्डोको खानपान शैली ? हेर्नुहोस्। यस्तो अचम्मको शैली
कीर्तिमानी फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो चिनीको सेवन गर्दैनन्, मदिरापान गर्दैनन् । खासमा उनका पितामा मदिराको लत थियो । अत्यधिक मदिराकै कारण उनको पिताको निधन भयो । त्यसैले उनले मदिरालाई घृणा गरेका छन् । उनका पिता जोजे डिनिस अभेइरो नगरपालिकामा माली थिए । आमा भने खाना बनाउने काम गर्थिन् । उनकी आमा क्यान्सरकी रोगी हुन्, जो उपचारपछि सामान्य जीवनयापन गरिरहेकी छन् । खासमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो गरीब परिवारमा जन्मिएका हुन् । पोर्चुगलको पहाडी बस्तीमा उनको बाल्यकाल बित्यो । गरीब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डोले सानै उमेरमा पढाइ छाडे । एक दाजु र दुई दिदीका कान्छा भाइ रोनाल्डो सानो छँदा एकै कोठामा कोचिएर सुत्थे । बुबाले नै कान्छो छोराको नाम जुराएका थिए, रोनाल्डो । हलिउड नायक तथा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको नामबाट प्रभावित भएर उनले छोराको नाम राखिदिएका थिए । १४ वर्षको उमेरमा उ
मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आयोग समक्ष माफी माग्दै भने, ‘आइन्द म यस्तो गल्ति गर्ने छैन’
काठमडौं । शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गल्ती भएको भन्दै आइन्द गल्ति नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले जातिय विभेदलाई बढवा हुनेगरि दलितमाथि विभेद गरेको भन्दै पक्राउ परेकी महिलालाई छुटाउनु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष आफ्नो गल्ति भएको भन्दै स्वीकार गर्नु भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी समक्ष आगामि दिनमा यस्तो गल्ति नगर्ने पनि प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो । जातिय विभेदलाई मुद्धामा पक्राउ परेकी महिलालाई मन्त्री स्वयम गएर छुटाई आफू सवार गाडिमा हालेर ल्याएको भन्दै आलोचित बन्नु भएको थियो । मंगलबलार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आवेशमा आएर त्यस्ता कार्य नगर्न निर्देशन दिनु भएको थियो । मंगलबार मानवअधिकार आयोगले कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेको थियो । अर्को खबर बालिका अपहरणका आरोपी जेल चलान सप्तरी । बालिकालाई अपहरण गरेको घटनाका आरो